Kutholwe isidumbu sephoyisa sishisiwe - Ilanga News
Home Izindaba Kutholwe isidumbu sephoyisa sishisiwe
Kutholwe isidumbu sephoyisa sishisiwe
Besivalelwe ebhuthini yemoto yalo, nayo ebingqongqiswe ngomlilo
UCONST Zolani Zuma okuthiwa wanyamalala eyohlangabeza isihlobo sakhe eKTT, eMaria-nnhill, isidumbu sakhe sitholwe sishisiwe emotweni.
KUSENZIMA ukwamukela okuwehlele umndeni wephoyisa lakwaZuma, eDasse-nhoek, eThekwini, isidumbu salo okuthiwa sitholwe sishisiwe ebhuthini yemoto yalo eyiPolo, elalihamba ngayo emasontweni amabili, okwavela ukuthi laliyola-nda unina omncane owayeyotapa impahla ngaseKTT, eMariannhill.
ILANGA langomhla ka-19-21 kuNtulikazi (July), labika kabanzi ngokunyamalala kukaConst Zolani Zuma obeyiphoyisa ngaphansi kophiko lwePublic Order Police (POP), obese kuphele amasonto amabili enyamalele emuva kokuphuma kubo eyohlangabeza
Odabeni oludlule, umfowabo kamufi, uMnu Bhunu Zuma, wa-tshela ILANGA ukuthi waphuma engafuni kwakuya ukuyolanda unina omncane, esho ukuthi akathandi ukuya khona, kodwa ngoba wayecelwa ngunina, wavuma.
Wabalisa ngokuthi kabazi ukuthi kwenzekeni kuyena ngoba ucingo lwakhe lwaseluvalekile kusukela ngoLwesibili lomhla ka-13 kuNtulikazi kwaze kwaba wumhla ka-18. Waveza ukuthi waphuma kubo egqoke ijakhethi emnyama ne-jean.
“Akayena umuntu ovele ahambe angabuyi ekhaya. Uma engekho lapha ekhaya, usuke esemsebenzini noma evakashele unina eSavanna Park,” kusho uMnu Zuma owayebalisa ngokuthi kabasabazi nobuthongo.
Elandisa leli phephandaba udadewabo kamufi, uNkz Nondu Zuma, uthe imoto yomfowabo ebishe yangqongqa emgwaqweni obheke kule ndawo okwakutatshwa kuyona, ihlale izinsukwana ngaphambi kokuba iqoqwe njengoba bese kuhlanzwa izindawo okwenzeke kuzona umonakalo.
“Kuthe uma beyivula ebhuthini, bathola kunesidumbu ebesesishe kakhulu, satha-thwa ngamaphoyisa ukuba siyohlolwa kabanzi. NgoLwesihlanu basitshele ukuthi bekunguyena impela uZolani lona obesemotwe-ni.
“Okwamanje kusenzima ukwamukela okusehlele, sibuhlungu kakhulu ezinhli-ziyweni njengoba bekungumuntu osemncane futhi enamaphupho amakhulu,” kusho uNkz Zuma.
Umndeni uthi ubungakazi ukuthi uzomfihla nini njengoba ubusazohlanganisa amakhanda.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe lolu daba njengoba luthinta iphoyisa, luphethwe wuPhi-ko loklebe, kalusekho ezandleni zabo.
Imizamo yokuthola uMnu Simphiwe Mhlongo okhulu-mela oKlebe KwaZulu-Natal, iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.
Uthunyelelwe umyalezo kuWhatsApp nawo wanga-wuphendula kwaze kwasha-ya isikhathi sokuloba.
Previous articleBaguqise izingwazi abakamgqumeni
Next articleIChiefs iguqise i-pirates kowendebe